थ्याङ्क गड, त्यतिबेला ब्वाइफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो र त म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ - Himali Patrika
थ्याङ्क गड, त्यतिबेला ब्वाइफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो र त म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ
हिमाली पत्रिका १ माघ २०७६, 11:33 am
लोकदोहोरी क्षेत्रकी व्यस्त मोडल हुन्, अञ्जली अधिकारी । उनले करिब चार सय हाराहारी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् । प्रकाश सपुतको ‘बोल माया’ गीतबाट उनी धेरै दर्शकमाझ छाइन् । पछि ‘प्रसाद’ फिल्मको ‘वनकी चरी’ गीतमा नाचेपछि उनको मोडलिङ उचाई थप बढ्यो । उनीसँग अनिल यादवले नागरिक शुक्रबारका लागि गरेको अन्तरंग कुराकानी :
हालसालै दोहोरीकी व्यस्त मोडल करिश्मा ढकालले दोहोरीका मोडलहरु दोहोरी क्षेत्रबाटै हेलामा परेको अभिव्यक्ति राख्नुभयो । फिल्मका हिरोइनहरुलाई लाखसम्म दिन पनि तयार हुने तर दोहोरीमै लागेका मोडललाई १०–१५ हजार दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने उहाँको तर्क थियो ।
मेरो घर बर्दिया हो । चार वर्षअघि बासगढी भन्ने ठाउँमा महोत्सव चलिरा’को थियो । महोत्सवमा काठमाडौंबाट शंकर बिसी, बद्री पँगेनी, पशुपति शर्मा लगायत कलाकार आउनुभएको थियो । बद्री दाइले त्यहाँनेर दोहोरीमा प्रतिस्पर्धा नै घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले म यहाँ स्टेजमा गाउँछु र स्टेज तल मेरो गीतमा जसले सबैभन्दा राम्रो र जर्बजस्त नाच्न सक्छ, त्यसलाई पाँच सय रुपैयाँ पुरस्कार दिन्छु भन्नुभयो । म पनि पूरा दिल खोलेर नाचेँ । पछि फस्ट पनि म नै भएँ ।
पाँच सय रुपैैयाँ पनि पाएँ । पुरस्कार थापेपछि मैले उहाँहरु सबैलाई मेरो कलाकारिता रुचिबारे सुनाएँ । त्यसपछि बद्री दाइले ‘हुन्छ, सुरुमा एउटा गीतमा चान्स दिन्छौँ ।
अस्ति एउटा अवार्डमा कपाललाई कर्ली बनाएर गएकी थिएँ । अंग प्रदर्शन गरेको थिइनँ तर कपाललाई लिएर हेर्न नहुने, पढ्नै नसकिने कमेन्ट्स आएको थियो । लङ ड्रेस लाएकी थिएँ तर कपाल त्यस्तो गरेको भन्दैमा त्यसरी गाली गर्नुभयो कि घरबाट ममी ड्याडीसम्मको फोन आयो । मान्छेहरुले मुखै छाडेर गाली गरेका थिए ।
लास्टै चित्त दुखेको थियो त्यो बेलामा । अर्चना पनेरुदेखि दुनियाँको पोर्न मुभी हेर्न हुने, मेरो कर्ली कपाल हेर्न नहुने ? कहाँको नियम हो त्यो ? मलाई त्यत्तिकै चित्त दुखेको होइन क्या ! ममीले रुँदै फोन गर्नुभयो, यो काम नै छोड्दे भनेर । अनि चित्त दुख्दैन त, आफैँ भन्नुस् न ।